“Ye Hibre-Biheer Federaalist Hayilooch Ximiret, Le Heeger Medihin” yokaan “Tumsa Humnoota Federaalummaa Gamtaa Sabootaa,” jedhama, kun Prezidaantiin tumsa paartiile kanaa – dura-taa’aan Sochii Bilisummaa Oromoo - Obbo Darajjee Beqqelee, walga’iin “Foramii Humnoota Federaalummaa” jedhamu, kan paartiilee kutaalee biyyattii hunda irraa itti hirmaatan kaleessa geggeessamuu isaa fi tumsi kun mallatteessamuu isaa dubbatan.
Paartiile afurtamaa ol tahan tu danbii naamumsaa fi danbii ittiin bulmaataa tumsichaa mallatteesse – kan jedhan, Obbo Darajeen, paartiileen gurmuu kana keessa turan garuu kaleessa hin mallatteessiin, mata mataatti kora paartiilee isaanii irratti murteeffatanii ttumsichatti akka makaman dubbatan.
Tumsi kun filannoo dhufaa jiru agobora tokko jalatti qindaa’uun mallattoo tokkichaan akka dorgomuuf jirus himanii jiru.
Itti-aanaa walitti-qabaan “Foramii Humnoota Federaalummaa” - Obbo Tigistuu Awwaluu, torban dabre, foramicha dhiisanii bahuu isaanii ibsanii turan.
“HIWEHAAT, “Paartiin Badhaadhinaa, paartii tokko tahuu ti” jechuudhaan qalbii sabaa fi sablammootaa hawachuun miseensa qaamichaa gochuuf malee, tumsichi ol’aantummaa HIWEHAAT deebisuutti ka fuuleffate,” jechuun morman – Obbo Tigistuun. Obbo Darajjeen garuu, “obbo Misgaanuun duraanuu hanqina naamusaatiin foramicha keessaa hari’atamanii turan” jedhu. Caqasaa